आज ह्वात्तै घट्यो सुनको मूल्य ! हेर्नुहोस् प्रति तोला कति पुग्यो……. – SUDUR MEDIA
June 18, 2021 June 18, 2021 AdminLeaveaComment on आज ह्वात्तै घट्यो सुनको मूल्य ! हेर्नुहोस् प्रति तोला कति पुग्यो…….
बहुमुल्य धातु सुनको मूल्यमा आज शुक्रबारको दिनमा भारी गिरावट आएको छ । शुक्रबार मात्र छापावाल सुनको मूल्य १२ सयले घटेको छ । गत बिहिबार पनि प्रतितोला ११ सय रुपैयाले घटेको सुनको मूल्य शुक्रबार १२ सय रुपैयाले घट्दै छापावाल सुन प्रतितोला ९० हजार ८०० मा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
त्यस्तै तेजाबी सुन पनि प्रतितोला १२ सय रुपैयाले नै घट्दै ९० हजार ३०० पुगेको छ । त्यस्तै शुक्रबार चाँदीको पनि मुल्य ३५ रुपैयाले घट्दै १३ सय ५ रुपैयामा झरेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
यो पनि हेर्नुहोस्ः आज मेलम्चीको अवस्था हेर्नुस, फेरी उर्लियो बाढी (भिडियो) ! मेलम्चीका बाढी पिडितलाई राहत र सहयोग लिएर कल्पना दाहालको टोलि अहिले मेलम्चीमा छ।लगातार १ हप्तादेखि देशैभर परेको अविरल वर्षाको कारण अहिले नेपालको पहाडी र तराई क्षेत्रमा बाढी पहिरोले प्रभाव पारेको छ । बढी पहिरोले गर्दा धेरै घरहरु बिस्थापित हुन पुगेका छन् । अहिले देश भर नै बाढी पहिरोको प्रकोप छ ।
जिल्ला प्रसासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका अनुसार बाढीले कम्तिमा २० जना बेपत्ता भएका छन । मेलम्ची खोला उर्लिंदा बस्ती डुबानमा पर्नुका साथै घर र पुलहरू बगाएको छ । त्यस्तै झोलुंगे तथा पक्कि पुल समेत बाढीले बगाएपछी मानिसको आउने जाने सम्पर्क नै टुटेको छ । मेलम्चीको पछिल्लो अपडेट हेर्नुहोसः